Ukubuyekezwa kwe-Punt Casino namakhodi wamahhala wamabhonasi wediphozithi
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-punt casino
Isibuyekezo se-Punt Casino
Ibhonasi Lokukwamukela:R200 Mahhala ayikho ibhonasi yediphozi
200% Ibhonasi ne 50 Izikhathi Zokudlala Mahhala
Yethulwe ngo-2017, iPunt Casino yiRealTime Gaming (RTG) yekhasino enikwa amandla eyamukela abadlali abavela eNingizimu Afrika. I-RTG ingomunye wabaholi uma kukhulunywa ngokuthuthukiswa komdlalo kanye nokukhiqizwa kwesoftware yekhasino, futhi banikeze lonke uhla lwemidlalo ePunt Casino.
Le nkundla itholakala kuwo womabili amafomethi wokudlala esuselwa kuwebhu nefomethi yokulandwa etholakala kuphela kumadivayisi e-Windows PC. Uhlobo lokulanda lukhulu ngobukhulu belabhulali yomdlalo. Kodwa-ke, inguqulo ye-web play ibuye iqoqe iqoqo elihloniphekile lemidlalo esukela kuwo wonke ama-slots, ama-jackpots, i-video poker, imidlalo yetafula kanye nemidlalo ekhethekile.
I-Punt Casino iyisinqumo esiphezulu sabadlali abazinze eNingizimu Afrika ngoba isekela amaRandi aseNingizimu Afrika kanye neBitcoins. Ukwesekwa kwamakhasimende kuyatholakala ngo-24/7 ngengxoxo ebukhoma futhi bahlala beshesha ukuphendula.
Amakhodi Wamabhonasi Wokwemukela e-Punt Casino 2021
Idiphozithi yokuqala Thola imali efinyelela ku-R3,500 mahhala ngebhonasi engu-100% usebenzisa ikhodi WELCOME100
Idiphozithi yesibili Thola imali efinyelela ku-R3,500 mahhala ngebhonasi engu-100% usebenzisa ikhodi WELCOME100
Idiphozithi yesithathu Thola imali efinyelela ku-R3,500 mahhala ngebhonasi engu-100% usebenzisa ikhodi WELCOME100
Iphakethe lokwamukela e-Punt Casino ibhonasi yediphozithi yomdlalo ekhishwa kudiphozithi yokuqala yangempela yemalini entsha kathathu. Kunamaphuzu ambalwa okufanele uwagcine engqondweni lapho ufuna ibhonasi yokwamukela. Okokuqala, idiphozi encane engu-R50 iyadingeka ukuthola ibhonasi futhi lokhu kusebenza kwidiphozi yokuqala, yesibili neyesithathu. Imali yebhonasi iyasebenziseka kuyo yonke imidlalo evunyelwe. Akukho mkhawulo wokukhishwa kwemali ophelele. Izidingo zokubheja zingu-40x inani lediphozithi + inani lebhonasi. Ukubheja kuphela kuma-slots nakumageyimu we-keno kubalwa kuye ngemfuneko yokubheja.
2021 Amakhodi Ebhonasi Angadingi Dephozithi e-Punt Casino
Bhalisa ne-Punt Casino bese ufuna Ibhonasi ye-chip engu-R200 yamahhala enekhodi yekhuphoni: i-NDC200.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Punt Casino
15% Ukubuyiselwa kwemali nsuku zonke Thola inani elingafika ku-15% wemali oyilahlekelwe kwidipozithi oyenza njalo
Amabhonasi ansuku zonke Thola ibhonasi nsuku zonke
Ayikho ikhodi yekhuphoni edingekayo yokufuna le bhonasi. Awudingi ngisho nokuxhumana nokuxhaswa kwamakhasimende ukuze ufune ibhonasi. Imali ebuyiswayo ibuyiselwa ngokuzenzakalela ku-akhawunti yakho nsuku zonke kuye ngokulahleka kwakho kwe-net okutholwe ngosuku lwangaphambilini.
Dlala njalo e-Punt casino futhi ungalindela okungenani ibhonasi eyodwa nsuku zonke zesonto. Le bhonasi ingaba nokubonakaliswa okuhlukahlukene. Ungaklonyeliswa ngama-spins wamahhala ngosuku olulodwa, ibhonasi yomdlalo ngokulandelayo noma nemali yamahhala kwezinye izimo. Eqinisweni, kwesinye isikhathi ungathola amakhodi amaningi ebhonasi ngosuku olulodwa. Ukuze uhlole ukuthi iyiphi ibhonasi etholakalayo ngosuku oluthile, mane ungene ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Punt yekhasino bese uhlola isigaba se-cashier.
Ungangena kanjani futhi ubhalise ku-inthanethi ePunt Casino
Uma usuvele unayo i-akhawunti ye-Punt yekhasino, vele uye kuwebhusayithi ye-Punt Casino bese uchofoza kunkinobho yokungena ephuzi engakwesokudla phezulu. Ngendlela yokungena ngemvume, faka igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi bese uchofoza inkinobho yokungena ngemvume ukuthola ukufinyelela ku-akhawunti yakho bese uqala ukudlala. Uma ungasebenzisanga i-akhawunti yakho ye-Punt Casino isikhashana futhi ne-password ishibilikile engqondweni yakho, usengachofoza inkinobho yokungena ngemvume bese usebenzisa isixhumanisi esithi ‘ukhohlwe iphasiwedi’ ukuthola iphasiwedi yakho ngendlela egcwele nephephile.
Abadlali abangenayo i-akhawunti ye-Punt Casino bazokwazi ukuyakha ngendaba yemizuzu. Inqubo yokubhalisela i-akhawunti entsha iyazichaza. Chofoza kuthebhu emhlophe ethi ‘Bhalisa’ eduze kwenkinobho yokungena ngemvume ukuze usebenzise ifomu lokubhalisa bese ufaka imininingwane embalwa yakho. Dala igama lomsebenzisi nephasiwedi, faka ikheli le-imeyili, ukhethe izwe lakho kwimenyu yokudonsela phansi, faka igama lakho, ubulili, usuku lokuzalwa, inombolo yeselula enekhodi yezwe, ikheli, khetha izwe lakho kwimenyu yokudonsela phansi bese chofoza ku-‘Qeda bese udlala ‘ukuqedela ukubhaliswa. Sicela wazi ukuthi ngokuhambisa ifomu uphinde uqinisekise ukuthi uyavumelana nenqubomgomo yobumfihlo ye-Punt Casino kanye nemigomo nemibandela yabo.
Uma usubhalise ngempumelelo, uzobona umlayezo othi ‘Siyakwamukela ku-Punt Casino’ kanye nenkinobho yokufuna ibhonasi yakho yokwamukela.
Imidlalo Yekhasino eku-inthanethi Ungayidlala e-Punt Casino
Uma ujwayele amakhasino e-RealTime Gaming, uzozizwa ulungile ekhaya udlala ePunt Casino. Indawo yokwamukela izivakashi umdlalo wendabuko we-RTG okulula ukuwusebenzisa,, ihlelwe kahle futhi igcwaliswe ngemidlalo esezingeni eliphakeme ezigabeni ezahlukahlukene zemidlalo ezinjenge-Online Slots, iTable Games, i-Video Poker kanye neMidlalo Ekhethekile.
Enye yezingqinamba zokudlala e-Punt Casino ukuthi awutholi ukudlala imidlalo ye-dealer bukhoma. Sithemba ukubona i-Punt Casino ingeza isitudiyo bukhoma kungekudala, kepha okwamanje, ayikho imidlalo ye-dealer bukhoma.
Ungangeza imidlalo esigabeni esithi ‘Izintandokazi zami’ noma kunini lapho ungena ngemvume ku-akhawunti yakho. Kukhona futhi izingxenye ezinikezelwe ekukhishweni kwakamuva nemidlalo enconyiwe lapho uzothola khona yonke imidlalo yakamuva evela ku-Realtime Gaming. Uma uthanda ukuhlola imidlalo emisha, lezi zingxenye zinokuningi okuzokujabulisa ngakho.
Dlala ama-Slots kusuka ku-Realtime Gaming, okuhamba phambili ebhizinisini
Isigaba se-Punt slots yiyona ekhasino okuvelele ngombono wethu. I-RealTime Gaming ingomunye wabathuthukisi bemidlalo abafunwa kakhulu embonini yeGaming futhi ama-slots abo ngeminye yemidlalo ephumelela kakhulu futhi edumile phakathi kwabathandi bekhasino eku-inthanethi baseNingizimu Afrika.
Isigaba semikhakha sinamakhulu ama-slots. Izikhala zakamuva zimakwe ngesibhengezo ‘esisha’ esibomvu. Zonke izithonjana ze-slot nazo zinesithonjana senhliziyo ongachofoza ukuze ungeze umdlalo ohlwini lwakho lwezintandokazi. Ungahlunga umdlalo ngokwakamuva kuye kokudala kakhulu, kusuka kokudume kakhulu kuye kokuncane okuthandwayo, noma ngokulandelana kwama-alfabethi. Uma ufuna imidlalo yama-slot enezingqikithi ezithile, uzothola okokuhlunga kwe-‘matimu ‘okungezansi. Ezinye zezindikimba ezifakiwe zifaka phakathi i-Action, i-Adventure, i-Fantasy, i-Asian, i-History, opopayi, ezemidlalo, ezakudala, i-TV, ama-movie, okunethezeka, uKhisimusi, isikhala nomculo.
Imidlalo embalwa yama-slot efanele ukukhulunywa ngokukhethekile ngamaMiami Jackpots, iSpring Wilds, iMardi Gras Magic, iWild Hog Luau neDiamond Fiesta.
Iqoqo Elithobekile Lemidlalo Yethebula engu-5.
Iningi labadlali bekhasino abakwi-inthanethi bavame ukukhathazeka kuphela ngesigaba semikhakha futhi iPunt Casino ibonakala ikwazi kahle lokhu. Isigaba sabo se-slot siyamangalisa, sikhulu futhi siziqhenya ngokuxuba okuhle kwezingqikithi nezici. Noma kunjalo, isigaba sabo semidlalo yetafula sinobuncane obungenalutho. Kunemidlalo emihlanu yetafula evezwe lapha – Suit ‘Em Up Blackjack, Blackjack + Pairs Perfect, Blackjack, Let‘ Em Ride and Tri Card Poker.
Imidlalo ye-Poker yevidiyo engu-14.
Njengamanje, kunemidlalo ye-poker eyi-14 futhi yonke inikela ngokuthile okuhlukile. Sincoma ukuzama le midlalo elandelayo ye-poker video –Aces and Eights, All American Poker, Bonus Poker, Joker Poker, Loose Deuces kanye neDeuces Wild.
6 Imidlalo Eyingqayizivele Ekhethekile
Kukhona izihloko ezikhethekile eziyisithupha ngalesi sikhathi – i-Fish Catch, iBanana Jones, i-European Roulette, iCaribbean Stud Poker, iCaribbean Hold’em Poker neKeno.
59 Inani Eliphakeme lamaJackpots aqhubekayo
Ufuna ukuwina okukhulu? Imidlalo eqhubekayo ye-jackpot e-Punt Casino ingakunika ngqo lokho. Njengamanje, kunemidlalo engu-59 ye-jackpot, efaka nezinqubekela phambili eziningi futhi. Imenyu yesigaba somdlalo ngakwesokunxele kwendawo yokwamukela izivakashi ayinaso isigaba esizinikele sama-jackpots, kepha uzothola imidlalo ye-jackpot kanye neminye imidlalo yama-slot esigabeni se-‘Internet Slots ‘. Indlela elula yokubuka yonke iMidlalo yeJackpot ngokusebenzisa inketho ethi ‘Hlunga Ngendlela’ bese ukhetha ‘Ama-Jackpots Amakhulu Kakhulu. Ngesikhathi sokubhala, inani elikhulu kunawo wonke le-jackpot linikelwa ngumdlalo i-Jackpot Pinatas Deluxe kanti i-jackpot yokufunelwa ibiza u-R5,575,000. Uzokwazi ukukhomba imidlalo ye-jackpot njengoba izithonjana zomdlalo we-jackpot zifaka umaki ophuzi ‘we-jackpot’ onenani lamanje lebhodwe.
Kuma Jackpots angu-59, amanye amabhodwe amakhulu anikezwa yi-Jackpot Cleopatra’s Gold Deluxe, Rudolph’s Revenge, Plentiful Treasure, Halloween Treasure ne-Naughty noma Nice.
I-Punt Mobile Casino: Iqhathanisa kanjani i-Punt Casino kwi selula?
Uma ucabanga ukuthi i-Punt Casino iyikhasino eku-inthanethi entsha sha eyethulwe ngo-2017, akumangazi ukuthi iyipulatifomu esebenzisa iselula ephathekayo. Njengoba sishilo ngaphambili, i-Punt Casino iyatholakala ngezindlela ezimbili – inguqulo yokudlala iwebhu nenguqulo yokudlala esheshayo. Noma kunjalo, abadlali beselula banenketho yokudlala iwebhu kuphela. Ifomethi yokudawuniloda ihambisana kuphela namadivayisi we-Windows PC futhi alukho uhlelo lokusebenza lweselula lwe-Punt Casino olunikezelwe.
Uhlobo lweWebhu Play lunemidlalo embalwa, kepha iqoqo elihlaba umxhwele impela. Ungadlala amakhulukhulu emidlalo yama-slot, ama-jackpots angu-50 + aqhubekayo, nemidlalo yetafula eminingi, izihloko ze-poker ezingaphezu kwezingu-10 nemidlalo engu-5 ekhethekile ku-smartphone noma kuthebhulethi yakho. Uma kukhulunywa ngamabhonasi, ayikho imikhawulo futhi. Wonke amabhonasi ongawacela ku-PC nawo ayatholakala ngokugcwele kuselula.
Imidlalo embalwa yama-slot efanelekile emidlalweni yeselula yi-Cash Bandits 3, Sweet 16, Asgard, i-Dr Winmore ne-Ancient Gods.
Ngingayi dawuniloda i-Punt Casino kuselula yami?
Kukhona inguqulo yokudawuniloda ye-Punt Casino etholakalayo, kepha lokhu kwenzelwa amadivayisi we-Windows PC kuphela. Abadlali beselula banenketho yokudlala kwewebhu kusukela manje.
Izindlela Zokukhipha Imali Noku Diphozitha Ezamukelwa e-Punt Casino
EasyEFT Yebo Yebo 3- 7 izinsuku zebhizinisi
Neteller Yebo Yebo Amahora angu 48-72
Skrill Yebo Yebo Amahora angu 48-72
ecoPayz Yebo Yebo Amahora angu 48-72
Bitcoin Yebo Yebo Amahora angu-24
Inhlangano kanye Nemininingwane Yokuxhumana ye-Punt Casino
Isungulwe: 2017 Inombolo yamahhala ye-SA: 0800 980 381
Kusetshenziswa I-: Punt E-mail: [email protected]
Ilayisensi: Ikhomishini ye-Curacao e-Gaming Ingxoxo Esheshayo: Yebo
Ayikho inguqulo Yokudawuniloda: Yebo Website: https://www.puntcasino.co.za/
Izinzuzo nezingozi ze-Punt Casino
Thola yonke imidlalo yakamuva kusuka kuRealtime Gaming
Uhlelo Lwemivuzo Yokwethembeka olunezinzuzo ezithile ezikhethekile
Iphakethe lokwamukela lenani eliphakeme
Imidlalo engu-59 ye-jackpot
Ayikho imidlalo yo-dealer ebukhoma
Imidlalo kuphela evela ku-RTG
Yini Eyenza I-Punt Casino Ukhetho Oludumile Kwabadlali BaseNingizimu Afrika?
Izinketho zebhange zaseNingizimu Afrika ezinobungane njenge-Instant EFT ziyatholakala
Ukuxhaswa kwengxoxo bukhoma okusheshayo nokuphendulayo amahora angu-24 ngosuku
Dlala uphinde ubhange ngama Randi wase Ningizimu Afrika
Ibhonasi yokwamukela enempilo elandelwa amabhonasi ansuku zonke
Izikhalazo ze-Punt Casino yase Ningizmu Afrika
Imidlalo ye-dealer ebukhoma ayitholakali
Imininingwane yohlelo lokwethembeka ayicaci
Ngabe iPunt Casino isemthethweni e-Ningizimu Afrika?
I-Punt Casino iyikhasino enelayisense futhi esemthethweni eku-inthanethi egxile ekukhonzeni abadlali abavela e-Ningizimu Afrika. Njengomdlali ozinze eNingizimu Afrika, ungadlala ePunt Casino ngaphandle kokukhathazeka nganoma yimiphi imiphumela esemthethweni yokwenza kanjalo
Ngikhipha Kanjani Imali Ku-Punt Casino?
Ukukhipha imali kulula. Udinga ukungena ngemvume ku-akhawunti yakho, iya esigabeni se-cashier, ukhethe khipha imali, ukhethe indlela yasebhange, faka inani lakho le mali nemininingwane yakho yase bhange bese uqinisekisa ukukhipha imali.
Yini i-Punt Casino?
I-Punt Casino iyikhasino eku-inthanethi enikezela ngemali yangempela yemidlalo efana nama slots, imidlalo yetafula kanye ne-video poker. Inikwe ilayisense yi-Curacao e-Gaming Commission.
Ubani Ophethe i-Punt Casino?
I-Punt Casino iqhutshwa yi-Yebo Casino Affiliates.
Ingabe i-Punt Casino inezici zokubheja kwezemidlalo
Cha Ukubhejela ezemidlalo akutholakali ePunt Casino.
Ingabe i-Punt Casino inikeza uhlelo lwe-VIP?
Yebo, i-Punt Casino inalo uhlelo lwe-VIP lapho ungathola khona izinzuzo ezikhethekile nokuphathwa kwe-VIP. Ngemininingwane ngohlelo lwe-VIP, thumela i-imeyili [email protected] enamagama athi ‘VIP request’ kulayini wezihloko.
Yiziphi Izidingo Zokubheja ePunt Casino?
Ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela, wonke amabhonasi ediphozi angaphansi kwesidingo sokubheja esingu-40x +